Qondaalli ABO jaal Daawit Abdataa eenyu? Qabsootti yoom makame? seenaa Gabaabaa SQ qindeeffate dubbifadhaa | Kichuu
Qondaalli ABO jaal Daawit Abdataa eenyu? Qabsootti yoom makame? seenaa Gabaabaa SQ qindeeffate dubbifadhaa
Posted on March 8, 2021 by kichuu_admin
Ibsa Ajajaa Ol’aanaa ABO-WBO
Oromoon biyya isaa dhabee, qabeenyi isaa saamamee, biyya isaa irratti sirna ittiin mirga isaa tikfatu, sirni Gadaa, jalaa diigamee, qabeenya isaa irratti akka hin abboomne mirgi isaa sarbamee, hiyyummaa fi gadadoof saaxilamee jiraachuu ykn du’uu irra, kan jiruu baqa filatan hedduu dha. Haa ta’uuti, Oromoon biyyaa fi biyyoo isaa irratti jiraachuu dadhabe biyya ollaa fi biyya ambaatti haa baqatu malee hiraarfamaa fi du’a irra hamaaf saaxilamaa jira.
Haala kanaan, ajjeechaan sukkaneessaa Bitootessa 7, 2021 mana hidhaa Yaman keessatti raawwates kallattiin biyya dhabuu Oromoo waliin wal-hidhate dha. Ajjeechaan sukkaneessaa kun kan kabajaa Oromoo qofaa osoo hin taane kabajaa dhala namaa mara kan xiqqeesse dha jechuun dandahama. Ilmaan Oromoo tohannaa mootummaa jala jiran, gara itti baqatan hin qabne, badii yoo qabaatan seeraan gaafatamuu dandahan kun hiccitiin bifa sukkaneessaa kanaan fanjiidhaan dhumatan itti murteeffame hubachuun rakkisu waan ta’eef qorannoo jabaa barbaada.
Kanaaf, qorannoo jabaa kan qaama walaba irraa ijaarameen, sadarkaa idil-addunyaatti qabamee akka qoratamuu fi qaamni badii kana raawwate murtii seeraatti dhihatu ajajaan ol’aanaa ABO-WBO akeeka. Qorannoon kun lubbuu qaalii ilmaan Oromoo nuuf deebisuu hanqatus gochaan wal fakkaataa akka irra hin deebihamneef barnoota kennee darbuu qaba. Qorannoon kun akka gaggeeffamus beektoti Oromoo, abbootiin seeraa, aktivistootaa Oromoo, dhaabbileen mirga dhala namaaf falman marti amnesty international, human right watch, genocide watch dabalatee dhiibbaa godhan yaamicha dhiheessina.
Ilmaan Oromoo biyya ambaa keessa jirtan marti, akka gurmuu fi nam-tokkeen kabajaa saba Oromoo fi dhala namaa maraaf jecha, tokkummaadhaan sagalee keessan ol-kaasuun biyyoota jirtan keessatti ambaasaddara miidhamtootaa ta’uun akka mootummooti keessa jirtan yakkamtoota ilmaan namaa lafa irraa fixan marti seeratti dhihatan hojii jabaa hojjettan ajajaan ol’aanaa ABO-WBO dhaama.
Ajjeechaan sukkaneessaa ilmaan Oromoo mana hidhaa Yemen fi Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiruuf sababaan jalqabaa gabrummaa uummata keenya irra jiru akka ta’e hubatamee, falli isaa ammoo biyya ofii dhuunfachuu, ijaarrachuu, tikfachuu fi sirna nagaa waaraa fiduu dandahu tolfachuun kabajaan jiraachuu akka ta’e fi gumaan obboloota keenyaas walabummaa Oromiyaa fi Bilisummaa Oromoo mirkaneessuun akka baafamu ajajaan ol’aanaa ABO-WBO hubachiisa.
Dhuma irratti gadda ulfaataa akka Oromootti nu mudate kana irra aanuuf Oromoon bakka jirutti akka wal jajjabeessuu fi wal gargaaru dhaamaa, ilmaan Oromoo Yemen fi biyya ambaa keessa jirtan, hiriyyoota, firoottan, maatii fi walumaa gala uummata Oromoo maraaf Ajajaan ol’aanaa ABO-WBO jajjabina isiniif hawwa.
Bitootessa 8, 2021
Qondaalli ABO jaal Daawit Abdataa eenyu? Qabsootti yoom makame? seenaa Gabaabaa SQ qindeeffate dubbifadhaa.
Daawit Abdataa Eenyu?
Daawit Abdataa maatii qabsaa’otaa irraa kan dhalate yoo tahu qabsoos maatiiwwan isaa kana irraa barachaa guddate. Maatiin Daawit Oromummaa isaaniin kan boonan qofa osoo hin taane hojiidhaanis qabsoo Oromoo ABOn durfamu keessatti hirmaachuun shoora isaan irraa eegamu bahachaa namoota biraaf fakkeenya tahaa qabsoof hawaasa ijaaraa akka turan namoonni itti dhiyyeenyaan beekan ragaa bahu.
Obbo Dastaa Hundeessaa Wasiila Daawit Abdataa yoo tahan qabsoo Oromoo keessatti gumaacha isaan godhan yoomillee galmeen seenaa of harkaa kan qabudha. Wasiilli Daawit Abdataa Obbo Dastaa Hundeessaa bara cee’umsaa magaalaa Maqii keessatti mana jireenyaa isaanii kan keessa jiraatan irraa gar tokkee muruun Waajjira ABOf akka tahu murteessun mana jireenyaa isaanii nama waajjira ABOf kennanii turanidha. Mooraan Wasiila Daawit obbo Dastaa Hundeessaa bara ceehumsaa sanatti waajjira ABO qofas osoo hin taane bakka qubsuma WBO ture.
Egaa Daawit Abdataa mooraa wasiila isaa kana keessatti waajjirri ABO banamee waan jiruuf dabalataanis bakka qubsuma WBO waan taheef ijoollummaan dhimma Oromummaa dabballoota ABO fi WBO kana irraa cichoomina qabsoo irraa barachaa ture.
Maatiin Daawit Abdataa hunduu kan qabsoo Oromoo Keessatti guddatan qofa osoo hin taane qabsoo Oromoofis warra gumaacha qabsoon gaafatu bahataa guddatanidha. Obbolaan hangafaa Daawit hedduun isaaniis qabsoo keessatti sochii gochuun qabsaa’anii ummata qabsootti guddisuu keessatti beekamu. Fakkeenyaaf obbolaa Daawwit Abdataa godina shawaa bahaa magaalaa Maqii ganda 01 keessatti dhalate. Baranoota isaa Sad. 1ffaa fi 2ffaa mana barumsaa Kaatolikii Maqiitti ( Meki Catholic School) jedhamutti baratee bara 1993 ALI ykn akka lakk. Awurooppatti 2002 xumure.
Daawit Abdataa warra qabsoo Oromoo ABOn durfamu keessatti sochii gochuun ummata dammaqsan dargaggoota qabsootti onnachiisaa turan keessaa muraasni Biraanuu Abdataa,Taklee Abdataa, Warqineesh Abdataa fi Mirkanaa Abdataa yoo tahan kanneen hunduu qabsoo ABOn durfamu keessatti shoora guddaa gumaachaa turan . Daawitis obboloota isaa kana irraa foolii qabsoo fuunfachaa deemsa qabsoo irraa barachaa qabsootti guddate.
Itti gaafatamaan Sabquunamtii ummataa ABO yeroo ammaa kan tahan jaal Battee Urgeessaa illee maatii Daawit Abdataa keessaa obboleettii Daawit hangafa kan taate Warqineesh Abdataa akka gara qabsoo oromoo ABOn durfamutti ilaalcha sabboonummaa fudhatee guddatuuf yeroo barnoota isaa kutaa 5ffaa fi kutaa 6ffaa baratu akka haalaan isa gorsaa turte ragaa ni baha. Akka jaal Battee Urgeessaa jedhanitti obboleettii Daawit Warqineesh Abdataa waliin kutaa 5ffaa fi 6ffaa yeroo barannu barcuma tokkorra teenyee deeskii tokko fayyadamaa akka baratan dubbachuun yeroo hunda kutaa barnootaa keessatti barsiisaan hin jiru yoo tahe Warqineesh Abdataa waan qabsoo Oromoo qofa na gorsiti anis baayyeen ishee caqasa ture waan qabsoo Oromoo kana dubbattee hin quuftu jechuun ragaa bahaaf.
Egaa Daawit Abdataa maatii sabboontotaa gidduutti waan dhalatee guddateef namoota ykn dargaggoota dammaqina qabsoo godhachaa guddatan keessaa tokko akka tures namootni itti dhiyyeenyaan beekan ni dubbatu. Daawit Abdataa Yeroo barnoota isaa Sad. 2ffaa barachaa ture sanatti ummurii isaa ijoollummaa sana keessatti WWBO(waldaa walgargaarsa barattota Oromoo) ykn maqaan iccitii isaa “Waldaa Waraana Bilisummaa Oromoo ” jedhuu kan bara 1989EC tti dhaabbate keessatti gahee isaas bahataa tureera. Waldaa wal gargaarsa Barattoota Oromoo maqaan icciitii isaa immoo Waldaa Waraana Bilisummaa Oromoo kan jedhu kana moggaasa maqaa kanaa Itti gaafatamaa sabquunnamtiin ummataa ABO yeroo ammaa Battee Urgeessaan kan moggaasame yoo tahu hundeefamee qabsoo Bilisummaa Oromoo fininsuu keessattis shoora dhaabbateef bahateera.
Yeroo waldaan kun dhaabbatu Daawit Abdataa fi Battee Urgeessaa barattoota kutaa 9ffaa baratan yoo tahu obboleessi Daawit Abdataa hangafti immoo Takilee kutaa 11ffaa barataa kan ture gorsaan isaan qajeelchaa fi waldaa kanas gaggeessummaan hogganaa ture.
Daawit Abdataas waldaakana keessatti hirmaannaa gochaa kan ture yoo tahu bara 1992EC-1993EC dura taa’ummaa waldaa kana kan gaggeessaa akka turee fi qabsoo sabaaf gahee isaa bahachuun gumaacha isa irraa eegamu bahachuu eegale. Daawit Abdataa umurii isaa kichuu irraa eegalee qqabsoo sabaaf gahee isaa gumachuu kan calqabes yeroo kanatti ture. Akkuma Barnoota Sad. 2ffaa xumureen qabxii ol aanaa galmeesisuudhaan bara 2003 ( 1993 ALI) Yuniivarsiitii Dillaatti ramadame baranootaa isaa eegale.
Barnoota isaas muummee Keemistirii keessatti ramadamuudhaan barachaa ture. Haa ta’u malee yeroo Yunivarsitii Diillaa barachaa ture sanatti sochii qabsoo bilisummaa Oromoof Wayyaanee irratti University Dillaa keessatti taasifamaa ture keessaatti namoota adda durummaan hirmaataa turan keessaa Daawwit Abdataa tokkodha. Kanaaf Wayyaaneen sochii inni QBO waahillan isaa waliin taasisaa ture hordofuun Waggaa tokkoof barnoota irraa uggurtee turte.
Wahilli isaa yeroo Sanaa fi itti gaafatamaan sabquunnamtii ummataa ABO yeroo ammaa jaal Battee Urgeessaas akkasuma isa waliin yuuniversitii biraa kan seene damee barnootaa biraan baruma kana kan seene akkuma Daawit Abdataa sochii qabsoo keessatti dargaggoota ijaarta jedhamuun shakkamee jaal Battee Urgeessaas wagga tokkoof yuuniversiitii irraa adabamuun seenaa wal fakkaatus ni qabu. Haaluma kanaan lamaan isaanii adabbii waggaa tokko booda barnoota isaaniitti deebi’uun barnoota isaanii Diigrii jalqabaa gosa barnootaa barataniin bara wal fakkaatutti 1997EC eebbifaman.
Daawit Abdataa fi Battee Urgeessaa dhalootaan magaalaa Maqiitti dhalatanii guddatanis carraan barnootaa waan isaan adda facaasteef Daawit Abdataa Yuuniversitii Diillaatti yoo baratu Battee Urgeessaa immoo yuuniversiitii Bahardaritti barate.
Daawit Abdataa fi Battee Urgeessaa yuuniversiitii baratan keessatti koree barruu Eebba barattoota Oromoo qopheessituu tahanis ammas dirqama dachaa qabsoon gaafattu karaa itti eenyummaa oromummaa yuuniversiitii keessatti argisiisamu irrattis walitti dhufuun hojjetaniiru.
Koree Eebba Barattoota Oromoo bara Sanaa Daawit Abdataa yuuniversiitii Diillaatti barattoota Oromoo bakka bu’uun qindeessaa kan ture yoo tahu yuuniversiitii Bahirdaritti immoo Battee Urgeessaa koree sana keessatti kan argamu karaa Lammii Beenyaa akka barruun sun maxxanu taasifame. Lammii Beenyaa barataa yuuniversiitii Bahirdaritti barataa engineering wagga 5ffaa eebbifamaa kan ture yoo tahu koree Eebba Barattoota Oromoo kanas adda dureen karaa caasaa dhaabaa [ABO] barruu sana maxxansiisee rabsuu keessatti shoora olaanaa taphateera.
Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa sababa barruu eebbifamtoota barattoota Oromoon bara 1997EC qophaaye irratti qopheessitoota yuuniversiitiilee itti baratanii tahanii osoo hojjetanii qabsoon wal isaan barsiifte. Gama biraan immoo Lammii Beenyaa fi Battee Urgeessaa yuuniversiitii Bahirdar keessatti sochii barattoota Oromoo keessatti bara 1994 irraa qabanii wal baranii waliin hojjechaa turan.
Daawit Abdataa Erga eebbifamee booda hojii barsiisummaa irratti bobba’uun magaalaa Finfinnee keessatti manneen barnootaa dhuunfaa bebbeekamoo hanga international School tti barsiisaa ture. Akkasumas osoo hojii barsiisummaa irra jiruu barnoota isaa Diigrii 2ffaa( MSC) Yunivarsitii Finfinneetti galmaa’ee ‘Food Engineering’ barachuudhaan bara 2008 qabxii gaariidhaan xumuree jira.
Erga barnoota isaa Diigrii 2ffaa xumuree booda Warshaa Shukkaaraa Mata Haaratti dorgomee darbuudhaan barnoota ittiin eebbifame qabatamaan hojii irra oolchuudhaan adda durummaan hawaasa isaa tajaajilaa tureera. Yeroo turtii Warshaa Shukkaara Mata Haaraa hojjachaa ture keessatti Daawwit Abdataa nama hojii isaa irratti dadhabe hin jenneefi halkanii guyyaa hojjachaa turuu isaa hiriyyoonni wajjin hojjachaa turan ragaa dha. Ammas dadhabe ykn nagahe osoo hin jedhin hojii itti ramadame hojjachaa barnoota fagoo( Distance Education ) Business Administration Yunivarsitii Finfinnee ( School of Commerce) irraa Diigrii biraa bara 2017 ( 2010) fudhateera.
Daawwit Abdataa yeroo qacaramee mindaa fudhachaa ture sanatti mindaa isaa qofaa nyaataa hin turre. Innis mindaa ji’aan argachaa ture irraa hiri’isuun ilmaan Oromummaa isaanitiif jecha mana hidhaatti dararamaa turan deddeebi’ee gaafachaa turuundhaan nama hanga isaaf danda’ameetti itti of kennee gargaaraa turee dha. Fknf yeroo Taayyee Danda’aan mataan mana hidhaa ture sanatti nama adda dureen mana hidhaatti deddeebi’uun gargaaŕaa ture keessaa nama tokko. Dabalataanis yeroo gaazexeessonni Oromoo Miidiyaa TV Afaan Oromoo irraa OPDOn ykn Wayyaaneen uuggurte sanas nama itti dhiyeenyaan ijoollee amma TV OBS keessaa jiran gargaaraa tureedha. Kana immoo inni himatee osoo hin taane namoota isatti dhiyaatan irraa qoratamee kan fudhatameedha.
Daawwit Abdataa nama naamusa qabeessa , nama nama kabaju , nama ol jedhee ija hamtuun nama ilaaluu miti, nama aadaa fi safuu Oromoo kabaju , nama waan itti amane fuulduratti baasee dubbatu . Yerroo baay’ee hiriyyaa baay’ee irra nama kitaaba dubbisu jaallatudha. Daawwit Abdataa yeroo baay’ee akka namni dubbisee of jijjiiruuf nama kallittii namatti agarsiisudha. Dandeettii hojii ( expertise work) irratti nama ogummaa fi dandeettii cimaa qabuu fi nama biyya kanaafillee bu’aa buusuu danda’a jedhamee yaadamuudha.
Daawit Abdataa naannawa Finfinnee laga xaafootti managera kampaanii tokkoo tahee kaffaltii guddaan qacaramee osoo jiruu qabsoo sabaaf yeroo isaa guutuu keennee hojjechuuf jecha hojii sanas lakkise. Kuni osoo kanaan jiruu bara 2018 jijjiirama Qabsoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo itti wareegameen dhufeen sababeeffachuun mootummaan wal dhibdee Adda Bilisummaa Oromoo ( ABO) waggaa 27 ol waliin qabu araara buusuuf godhee akka gara biyyaatti galanii karaa nagaatiin biyya keessatti qabsaa’an heeyyamuun ni beekama.
Haaluma kanaan Daawwit Abdataatis dhaaba ijoollumaa isaa irraa kaasee deeggaru fi jaallatu biyya keessatti waliin qabsaa’uuf itti dabalamee Itti Gaafatamaa Ijaarsa fi Siyaasaa ABO Godina addaa naannoo Finfinnee ta’uun dargaggoota Oromoo qabsoo ABO keessatti karaa nagaa qabsaa’anii mirga isaanii qofaaf osoo hin taane kan Saba Oromoo fi Lammiilee Oromiyaaf nagaa fi Tasgabbiin akka jiraatuuf kaayyoo ,Heeraa fi seera ABOn taliigamanii akka qabsoo saba isaanii gaggeessaniif hojjachaa osoo jiruu ajjeechaa Haacaaluu Hundeessa booda jaala isaa waliin jiraatu dargaggoo Lammii Beenyaa waliin qabamee kan hidhame yoo tahu erga hidhamees manneen hidhaa gara garaa keessatti daddabarfamuun dararamaa jira.
Yeroo ammaa kanas jaala Qabsoo isaa waliin qabame Dargaggoo Lammii Beenyaa waliin mana hidhaa Daalattii kan magaalaa Sabbataatti argamu kan baayyee dhiphaa tahe bal’inni kutaa itti hidhamanii jiraniis kaaree meetirii 12 ( 3*4) ta’e kan nama 3 ykn 4 caalaa qabachuu hin dandeenyee keessatti yeroo hanga baayyinni namoota 25 waliin hidhamuun hirriiba Malee wal irra taa’aa bulanii Fi akkasumas qarshii amma dura guyyatti Qar 20 nyaataaf kennamuuf irraa hambisanii nyaata gahaa qulqullina hin qabnee fi bishaan dhugaatii fi dhiqannaa qaamaas tahe bakka itti huccuu miiccatan ykn qulqulleeffatan kan hin qabnetti hidhamanii kan jiran yoo tahu namoonni isaan waliin hidhamanii jiran illee namoota baadiyaa irraa mootummaan ofii isaatii dirqiin qarshii liqeessefii namoota qarshii liqii sana fudhatanii yeroon sababa dhala isaa waliin hin kaffalleef jecha hidhamanii jiran waliin hidhamanii jiru.
Dhimma ABO jidduu seenuudhaan Shira Paartiin Badhaadhinaa (ብልጽግና ፓርት) PPn Xaxaa jiru irratti
IBSA GADDAA ABO: Jaal Dheengee Huseen Kulaa, Miseensa Koree Hojii Gaggeesituu ABO
Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO): Ebla 15, Guyyaa Goototaa
This entry was posted in News by kichuu_admin. Bookmark the permalink.